HomeAfaan OromooFilannoo Biyyaalessaa Marsaa 6ffaa Irratti Paartiin KFO akka hin hirmaanne Dura Taa’aan Paartichaa ibse.
Filannoo Biyyaalessaa Marsaa 6ffaa Wayta Duulli Nafiladhaa fi Galmeen Kaadhimamtootaa gaggeeffamaa jirutti, Paartiin KFO akka irratti hin hirmaanne Dura Taa’aan Paartichaa ibse.
BBS: Gur. 17, 2021
Filannoo Itoophiyaa marsaa jahaffaa kan Caamsaa dhufu keessa gaggeeffamuuf jiru galmeen kaadhimamtootaafi duulli na filadhaa ifatti eegaluu Boordiin Filannoo Biyyaalessaa beeksisee ture.
Paartilee Morkattootaa kan dorgommiif dhiyaatan keessaa Kongiresiin Federaalawaa Oromoo(KFO) tokko yeroo tahu, galmee kaadhimamtootaafi duula na filadhaa kanarratti akka hin hirmaanne ibsee jira.
Akka Gabaasaa BBC Afaan Oromoo irraa hubatamutti, Dura taa’aan KFO Pirofeesar Mararaa Guddinaa hanga mootummaan gaaffii keenya deebisutti filannoof jennee socho’uu hin dandeenyu je’an.
”Hooggantoonniifi miseensonni gameeyyiin paartichaa bakka hidhaa jiranitti, akkasumas waajjiraaleen hedduun bakka nu jalaa cufamanii jiranitti karaa ittiin sochoonee filannoorratti hirmaannu hin qabnu kan je’an Professor Mararaan, kanarratti boordii filannoo fi mootummaaf gaaffii dhiyeesaniifillee, Mootummaan garuu hanga ammatti deebisaa nuuf hin kenninee je’an. Dabaluunis Miseensonni hidhaa jiran akka hiikaman, waajjiraaleen cufaman akka saaqamaniifi dirreen siyaasaa bal’atee namuu walabummaadhaan socho’ee akka filannoorratti hirmaatu gaafannus waanti adeemaa jiru garuu bitaa nutti tahee jira je’an dura taa’aan kun. Mootummaan Itoophiyaa namoota shan akka filannoo biyyaalessaa marsaa ja’affaa adda durummaan raawwachiisaniif filatee jira.
Isaanis Aadde Birtukaan Miidhagsaa walitti qabduu boordichaa yoo ta’an, miseensonni biroo hafan afur: Obbo Wubishat Ayyalaa, Aadde Bizuuwarq Kattatee, Dr. Abarraa Dagafaa fi Obbo Fiqree Gabrahiwoot tahuu Boordiin finannoo ibsee jira. Namoonni kunneen mana maree bakka bu’oota uummataatti dhiyaatanii kan muudaman yoo ta’u, dhimma filannoofi rifarandamirratti murteessuuf aangoon kan kennameefi tahus ibsan.
Namoota shanan akka filannoo raawwachiisaniif filaman kanneen irrratti Pirofeesar Mararaan wayita yaada kennan, ”tartiibuma maqaasaaniitu nutti ergame malee, maal akka ta’aniifi eessaa akka dhufan wanti beeknu hin jiru jechuun ibsan.
Itti fufuunis, Waliinis hin mari’anne. Garuu waa’ee namoota filannoo raawwachiisanii irratti gaaffii dhiyeessaa turrus, deebii quubsaan nuuf hin kennamne,” je’an .
Paartileen Siyaasaa Oromoo Filannorratti Ni hirmaatan Je’amanii eegaman Lamaan ABO FI KFO n Yaada wal fakkaataa Boordichaaf dhiheessaan kan jiran yeroo tahu, Hooggantoonni Fi Miseensonni isaanii baay’inaan hidhaman hanga hiikamanitti, Akkasuma Waajjiraaleen isaanii Guutummatti jalaa cufame hanga banamutti filannorratti hirmaachuun nurakkisa yaada je’u dhiheessaa turan.
Komii paartilee kanneenii irratt yaada kan kenne Boordiin Filannoo Biyyaalessaa, paartileen kunneen waajjirri nu jalaa cufame jechuu malee eessatti, yoom, meeqa akka cufame hin ibsine jechuun ni yaadatama.
Kanarratti Pirofeesar Mararaa Guddinaa, ”Boordiin Filannoofi mootummaan Itoophiyaa akka waajjirri nurratti cufame ni beeku, Bansiisuufis fedhii hin qaban, Eessaa cufameefi yoom cufamee osoo hin taane fedhumti isaaniituu gara kana hin jiru,” je’an. Dabaluunis Pirofeesar Mararaan Gabaasaa akkaataa Waajjirichi itti Cugamee fi hundaahu galchinee jirra, kaka’umsas qabna, je’an. ”Waajjirri keenya 100 ol cufameera, Hundumaafuu rakkoon kun hiikamu malee waa’ee filannoo waan goonu hin jiru.” ”Rakkoon kun hin furamu taanaan filannaa hin qabnu, Boordii filannoos ta’ee, mootummaas haata’u gaafachuu itti fufna,” je’an.
Gama biraatin Qabsoo hidhannoo keessatti waggoota 40 caalan kan lakkoofsise Addi Bilisummaa Oromoo erga meeshaa waraanaa dhiisee karaa nagaan qabsaa’uuf waggaa lamaafi walakkaa dura biyyatti galee as, torakkoo jabduun akka harkaa isa qabu irra deddeebiin ibsaa ture.
ABOtis akkuma KFO waajjiraaleen irratti cufamuufi miseensonni jalaa hidhamuu komataa jira.
Gochaan Paarticharratti Gara Mootummaatin raawwatamaa jiru, Aggaammii Bara Mootummaa Cehumsaa deebisaa akka jiru ibsa isaa keessatti himachaa ture.
Hooggantoonni dhaabichaa 178, waajjirri muummeen Gullallee jiruufi waajjiraaleen godinaalee 103 ta’an jalaa cufamanii jiraachuu himan Hayyu Dureen ABO Obbo Dawud Ibsaa.
Warraaqsaafi fedhii jijjiiramaa hawaasi agarsiiseen waggaa sadi dura bara 2018 aangootti kan dhufan Ministirri Muummee Abiy Ahmad, jalqaba wayita aangoo qabatan hojii ijoon isaanii dirree siyaasaa bal’isuufi filannoo haqa qabeessa gaggeessuun dimokiraasii dhugaa ijaaruu ture.
MM Abiyyi, guyyoota Muraasa dura Lixa Oromiyaatti imaluun wayita daandiiwwan ijaaraman eebbisiisanii fi dhagaa bu’uuraa kaa’an ergaa hawaasaaf dabarsan keessatti waa’ee filannootis dubbatanii, uummanni tasgabbaa’ee kan barbaade filachuu danda’a, kanaaf haalli mijataadha jechuun dubbachuun ni yaadatama.
Paartileen mormituu dirreen siyaasaa waggaa lama dura ture dhiphateera jechuun yeroo komatana, Mootummaan garuu dhimma kanarratti carra dhufe itti – fayyadamuurratti rakkoon ture jechuun dubbata.
Filannoo Biyyaalessaatif Paartileen Siyaasaa Saboota biraa irraa tahan wayta Duula Na filadhaa fi Galmee Kaadhimamtootaa gaggeessaa jiranitti, Paartileen Siyaasaa Oromoo, Haalli Isaanif aanjawuu dhabuun Filannoo keessaa hambisuuf itti yaadamee hojjatamaa jira jechuun Rogeeyyonni dubbachaa jiru.
Sababa kanaaf Oromiyaa Kutaalee gara garaa keessatti Hiriirri Mormii Barattootaan gaggeeffamaa jira, Dhaadannoon Hiriiricharratti dhageessaifamaa ture keessaa, Filannoon ABO fi KFOn keessatti hin hirmaanne Oromiyaa keessatti hin gaggeeffamu kan je’an keessatti argamu.